सबैका लागि दया, विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
जब मानिसहरू अमेरिका र अन्य देशहरूमा शोकको दिन, सेप्टेम्बर १,, २००१ मा भेला भए, तिनीहरूले सान्त्वना, प्रोत्साहन र आशाका शब्दहरू सुने। यद्यपि शोकमा डुबेका राष्ट्रलाई आशा प्रदान गर्ने तिनीहरूको अभिप्रायको बिरूद्ध धेरै रूढीवादी क्रिश्चियन चर्चका नेताहरूले अन्जानमै यस्तो सन्देश फैलाए जसले निराशा, निरुत्साह र डरलाई बढावा दिए। त्यो भनेको ती व्यक्तिलाई भन्नु हो जसले आक्रमणमा आफ्नो प्रियजन गुमाएका छन, आफन्त वा साथीहरु जसले ख्रीष्टलाई कबूल गरेका थिएनन्। धेरै कट्टरपन्थी र ईभान्जेलिकल इसाईहरू यस कुरामा विश्वस्त छन् कि जो कोहीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगरी मर्छ, यदि उसले केवल ख्रीष्टको बारेमा कहिल्यै सुनेन भने, ऊ मृत्यु पछि नरकमा जानेछ र त्यहाँ अवर्णनीय पीडा भोग्नेछ - ईश्वरको हातबाट, जुन ती इसाईहरूले विडंबनाका साथ प्रेम, अनुग्रह र कृपाका परमेश्वर भनेर बोलेका छन्। "भगवानले तपाईंलाई प्रेम गर्नुहुन्छ" हामी कोही कोही इसाईले भनेको जस्तो देखिन्छ, तर त्यसपछि सानो प्रिन्ट आउँछ: "यदि तपाईंले मृत्यु अघि आधारभूत प्रार्थना गर्नुभएन भने, मेरो दयालु प्रभु र मुक्तिदाताले तपाईंलाई सदाका लागि यातना दिनुहुनेछ।"
येशू ख्रीष्टको सुसमाचार एउटा शुभ समाचार हो (ग्रीक euangélion = खुशी ग्राहक, मुक्तिको सन्देश), "राम्रो" मा जोड दिएर। यो सबैका लागि सबै सन्देशहरूमा सबैभन्दा खुशीको रहन्छ र रहन्छ। मृत्यु भन्दा अगाडि ख्रीष्टसँग परिचित भएका थोरै मानिसहरूका लागि यो केवल शुभ समाचार मात्र होइन; यो सबै सृष्टिका लागि खुशीको खबर हो - अपवाद बाहेकका सबै मानिसहरूका लागि, जो ख्रीष्टको बारेमा कहिलै पनि सुन्न नसक्ने मरेकाहरूलाई समेत।
येशू ख्रिष्टले केवल इसाईहरूको पापको लागि मात्र नभई सारा संसारको निम्ति मेलमिलापको वरदान हो (१ यूहन्ना :1:१:2,2)। सृष्टिकर्ता पनि आफ्नो सृष्टिको मेलमिलापकर्ता हुनुहुन्छ (कलस्सी १: २ 1,15-२20) व्यक्तिले मर्नु अघि यो सत्य सिक्ने कि त्यसको सत्यता सामग्रीमा निर्भर गर्दैन। यो केवल येशू ख्रीष्टमा निर्भर गर्दछ, मानव कार्य वा कुनै मानवीय प्रतिक्रियामा होइन।
येशू भन्नुहुन्छ: "यसकारण परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो ताकि उहाँमा विश्वास गर्ने सबै हराउनेछैन, तर अनन्त जीवन प्राप्त गर्दछ" (यूहन्ना :3,16:१, सबै उद्धरणहरू संशोधित लुथर अनुवाद, मानक संस्करण)। यो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो र परमेश्वर जसले आफ्नो छोरालाई दिनुभयो; र यो उसले आफूले माया गरेको कुरालाई फिर्ता दिन - संसारलाई। जसले परमेश्वरले पठाउनु भएको पुत्रमाथि विश्वास गर्दछ उसले अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नेछ (राम्रो: coming आउने युगको जीवनमा।)।
कुनै अक्षरांश बिना नै यो लेखिएको छ कि यो विश्वास शारीरिक मृत्यु हुनु अघि आउनुपर्दछ। होईन: पदले बताउँछ कि विश्वासीहरू "हराउँदैनन्", र किनकि विश्वासीहरू पनि मर्छन्, यो कुरा स्पष्ट छ कि "हराएको" र "मर्ने" एउटै कुरा होइन। विश्वासले मानिसहरूलाई हराउनबाट बचाउँछ, तर मर्नुबाट रोक्दैन। ग्रीस अपोल्मीबाट अनुवाद गरिएको येशू यहाँ बोल्नुहुने हानिले आत्मिक मृत्युलाई संकेत गर्दछ, शारीरिक होइन। यो अन्तिम विनाश, उन्मूलन, ट्रेस बिना गायब हुनु पर्छ। जसले येशूमा विश्वास गर्दछ उसले त्यस्तो अपरिवर्तनीय अन्त भेट्टाउँदैन, तर जीवनमा प्रवेश गर्दछ (soe) आउँदै गरेको युग को (आयन)
केहि अझै पनि आफ्नो जीवनकालमा प्रवेश गर्दछन्, पृथ्वीमा हिडन को रूप मा, आउँदै गरेको युग मा जीवनको लागि, साम्राज्यको जीवनको लागि। तर तिनीहरू केवल "संसार" को एक सानो अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व गर्दछ (ब्रह्माण्ड) कि परमेश्वरले यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि तिनीहरूलाई बचाउनको लागि उहाँले आफ्ना छोरालाई पठाउनुभयो। बाँकी के गर्ने? यस पदले बताउँदैन कि विश्वास नगरी शारीरिक रूपमा मर्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले बचाउन सक्नुहुन्न वा बचाउँनुहुन्न।
शारीरिक मृत्युले भगवानलाई एकपल्ट बाधा पुर्‍याउँछ भन्ने धारणा र कसैलाई बचाउन वा येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने सबै सम्भावनाहरूको लागि मानवीय व्याख्या हो; बाइबलमा त्यस्तो कुनै कुरा छैन। बरु, हामीलाई भनिएको छ: मानिस मर्दछ, र त्यसपछि न्याय आउँछ (हिब्रू १०: २)) न्यायाधीश, हामी सँधै यो कुरा बिर्सन चाहन्छौं कि, मानव पापको निम्ति मर्नुभएका, परमेश्वरको थुमा मारिएका थुमा, येशू बाहेक अरू कसैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछ। त्यसले सबै कुरा परिवर्तन गर्दछ।
सिर्जनाकर्ता र मेलमिलापकर्ता
मरेकाहरूलाई होइन, जीवितहरूलाई मात्र बचाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको धारणा कहाँबाट आयो त? उसले मृत्युलाई जित्यो, होइन? ऊ मरेकाहरूबाट उठ्यो, होइन र? भगवानले संसारलाई घृणा गर्नुहुन्न; ऊ उसलाई माया गर्छे। उसले नरकको लागि मानिस बनाएको छैन। ख्रीष्ट संसारको उद्धार गर्न यस समयमा आउनुभएको हो, न्यायको लागि होइन (यूहन्ना १:3,17:१)
आक्रमण पछि सेप्टेम्बर १ the, आइतवार, एक मसीही शिक्षकले आफ्नो आइतवारको स्कूलको कक्षालाई भने: परमेश्वर प्रेममा घृणामा जति नै सिद्ध हुनुहुन्छ, यसले नरकको रूपमा र स्वर्ग पनि किन हुन्छ भनेर वर्णन गर्दछ। द्वैतवाद (ब्रह्माण्डमा असल र खराब दुई बराबर कडा विरोधी विरोधी शक्ति हो भन्ने धारणा) एक झूटा शिक्षा हो। के उनले यस्तो महसुस गरेनन् कि उनले परमेश्वरमा द्वैतवाद परिवर्तन गरिरहेको छ कि, उसले त्यस्तो ईश्वरलाई पोष्ट गरिरहेको छ जसले सिद्ध घृणा - सिद्ध प्रेमको तनावलाई मूर्त रूप दिनुहुन्छ?
परमेश्वर एकदम धर्मी हुनुहुन्छ र सबै पापीहरूको इन्साफ र निन्दा गरिन्छ, तर सुसमाचार, शुभ समाचारले हामीलाई रहस्यमा शुरू गर्दछ कि ख्रीष्टमा परमेश्वरले यो पाप र हाम्रो निम्ति यो सजाय स्वीकार्नुभयो! वास्तवमा, नरक वास्तविक र भयानक छ। तर वास्तवमा यो भय terrible्कर नरक भनेको त्यो अभक्तहरूका लागि आरक्षित थियो जुन मानवजातिको पक्षमा येशूले भोग्नु भयो (२ कोरिन्थी :2:२१; मत्ती २:5,21::27,46; गलाती 3,13:१)
सबै मानिसहरुलाई पापको सजाय दिइयो (रोमी :6,23:२), तर परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्टमा अनन्त जीवन दिनुहुन्छ (समान पद) त्यसैले यसलाई भनिन्छ: अनुग्रह। यसभन्दा अघिको अध्यायमा पावलले यसरी लेखेका छन्: gift तर उपहार पाप जस्तो छैन। किनकि जब धेरै जना एउटैको पापको कारणले मर्दछन् ['धेरै', जसको अर्थ सबैजना, सबैजना); आदमको अपराध सहन नसक्ने कोही छैन। परमेश्वरको अनुग्रह र वरदान धेरैलाई दिइयो [फेरि सबैलाई, सबैलाई] एक जना मानिस येशू ख्रीष्टको अनुग्रहले। (रोमी :5,15:११)।
पावलले भने: हाम्रो सजाय जति कठिन छ, र यो एकदम गाह्रो छ (फैसला नरकमा छ), त्यसैले उनी अनुग्रहबाट र ख्रीष्टको अनुग्रहको उपहारबाट हटाइन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, परमेश्वरमा मेलमिलापको शब्द आदममा भएको उनको निन्दाको शब्दभन्दा अलि बढी जोडिएको छ - एउटालाई अर्कोले पूर्ण रूपमा डुबायो। (How अरू धेरै »द्वारा)। त्यसकारण पावल हामीलाई २ कोरिन्थी :2: १ in मा बताउन सक्दछन्: ख्रीष्टमा God [परमेश्वरले] संसारसँग [सबैलाई, रोमी from:१ many बाट "धेरै" लाई मिलाप गर्नुभयो) र उनीहरूका पापहरूको गणना गर्नुभएन [अरू]। । »
उनीहरूका साथीहरू र प्रियजनहरूलाई फर्केर जो ख्रीष्टमा विश्वास नगरी मरेका थिए: के सुसमाचारले उनीहरूलाई कुनै आशा, कुनै प्रोत्साहन प्रदान गर्दछ जसलाई आफ्ना प्रियजनहरूको भाग्यको बारेमा छ? वास्तवमा, यूहन्नाको सुसमाचारको पुस्तकमा येशू मौखिक बोलीमा यसो भन्नुहुन्छ: "अनि जब म पृथ्वीबाट उचालिन्छु, म सबैलाई मतिर आकर्षित गर्छु" (यूहन्ना १:12,32:१) यो शुभ समाचार हो, सुसमाचारको सत्यता। येशूले तालिका तोकिनुभएन, तर उनले भने कि उहाँ सबैलाई आकर्षित गर्न चाहानुहुन्छ, केवल थोरै मात्र होइन जसले उहाँलाई मृत्यु भन्दा पहिले चिन्न सक्थे, तर सबैलाई।
यसमा अचम्म मान्नु पर्दैन कि पावलले कोलोसी शहरका ख्रीष्टियनहरूलाई लेखेका थिए कि परमेश्वर "प्रसन्न हुनुभयो", याद गर्नुहोस्: "खुशी हुनुभयो" कि उहाँद्वारा ख्रीष्टले "आफूसित सबै कुरा मिलाप गर्नुभयो, चाहे त्यो पृथ्वीमा होस् वा स्वर्गमा, उहाँ आफैले शान्ति बनाएर। क्रसमा रगत (कलस्सी १:१:1,20)। त्यो राम्रो समाचार हो। र, जसरी येशू भन्नुहुन्छ, यो सम्पूर्ण संसारका लागि शुभ समाचार हो, केवल निर्वाचित व्यक्तिहरूको सीमित समूहका लागि मात्र होइन।
पावल आफ्ना पाठकहरूलाई यो कुरा बताउन चाहन्छन् कि येशू, मृतकबाट जीवित हुनुभएको येशू, केहि नयाँ ईश्वरशास्त्रीय विचारहरू भएको धर्मको एक रोचक नयाँ संस्थापक मात्र होइन। पावल उनीहरूलाई भन्छन् कि येशू अरू कुनै चीज होइन तर सबै थोकका सृष्टिकर्ता र सहयोगी हुनुहुन्छ (पद १-16-१-17), र यो भन्दा बढि: यो कि ईश्वरको तरीकाले बिल्कुलै प bring्क्तिबद्धतामा फिर्ता ल्याउने इतिहासको सुरुवातदेखि इतिहासमा असफल भएको छ। (पद २०)! ख्रीष्टमा - पावल भन्छन् - परमेश्वरले इस्राएललाई दिईएको सबै प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्न अन्तिम कदम चाल्नुहुन्छ - एक दिन उसले सबै पापहरूलाई क्षमा गर्ने, पूर्ण र सर्वव्यापी रूपमा कृपा देखाउने, र सबै कुरा नयाँ बनाउने प्रतिज्ञा गर्छ। (प्रेरित १ 13,32: 33२--3,20;:: २०-२१; यशैया: 21: १;; प्रकाश २१:;; रोमी:: १ -43,19 -२१)
"तर मुक्ति केवल ईसाईहरूको लागि हो," कट्टरपन्थीहरू रोए। निश्चित, यो सहि छ। तर "क्रिश्चियन" को हुन्? के यो केवल ती मानिसहरु हुन् जसले एक पश्चाताप र रूपान्तरणको प्रार्थना माने? के यो केवल विसर्जनद्वारा बप्तिस्मा गरिएको छ? के तिनीहरू केवल "साँचो चर्च" सँग सम्बन्धित छन्? केवल कानुनी रूपमा नियुक्त पुजारीको माध्यमबाट मामुक्ति प्राप्त गर्नेहरू? केवल पाप गर्नेहरू रोक्नेहरू? (के तपाईंले यो गर्नुभयो? मैले गरेन।) केवल तिनीहरू जसले येशूलाई मर्नु अघि उनीहरूलाई चिन्थे? वा के येशू आफैले - जसका न nहरूमा छेडेका हातहरूमा परमेश्वरले न्याय राख्नुभएको छ - अन्ततः निर्णय गर्नुहुन्छ कि उहाँ जसलाई कृपा देखाउनुहुन्छ ती सर्कलका हुन्? एक पटक ऊ त्यहाँ पुगेपछि उसले निर्णय गर्छ कि कसले मृत्युमाथि विजयी भएको छ र कसले चाहेको अनन्त जीवन दिन सक्छ, चाहे उसले कसैलाई विश्वास गरेमा वा हामी साँचो धर्मको चौतर्फी रक्षकहरूलाई भेट्छौं , यसको सट्टामा यो निर्णय?
कुनै समय, प्रत्येक इसाई एक इसाई भएको छ, जसलाई पवित्र आत्माले विश्वास गर्न ल्याएको छ। तर कट्टरपन्थी स्थिति देखिन्छ कि कसैलाई उसको मृत्यु पछि विश्वास गर्नु ईश्वरको लागि असम्भव छ। तर पर्खनुहोस् - मरेकाहरूलाई बिउँताउने येशू नै हुनुहुन्छ। र उहाँ एक हुनुहुन्छ जो मेलमिलापको शिकार हुनुहुन्छ, केवल हाम्रो पापको लागि मात्र होइन तर सारा संसारका लागि (१ यूहन्ना :1:१:2,2)।
ठूलो खाली ठाउँ
"तर लाजरसको उखान" केहीले तर्क गर्नेछन्। "के अब्राहमले आफ्नो पक्ष र धनी मानिसको पक्षको बीचमा ठूलो, अनिर्न नसकिने खाई छ भन्छन्?" (लूका १ 16,19: १ 31 -१ हेर्नुहोस्।)
येशू यस दृष्टान्तलाई मृत्युपछिको जीवनको फोटोग्राफिक चित्रणको रूपमा बुझिएको चाहनुहुन्न थियो। कतिजना इसाईहरूले स्वर्गलाई "अब्राहमको काख" भन्ने ठानेका थिए, जहाँ येशू कहिँ पनि देखिन? यो दृष्टान्त पहिलो शताब्दीमा यहूदी धर्मका विशेषाधिकार प्राप्त वर्गका लागि सन्देश हो, पुनरुत्थानपछिको जीवनको चित्र होइन। येशू लेख्नु भन्दा पहिले हामी पढ्नु भन्दा पहिले, रोमी ११::11,32२ मा लेखेको कुराको तुलना गरौं।
दृष्टान्तमा धनी मानिस अझै पश्चाताप गर्दैन। ऊ आफूलाई अझ लाजरस भन्दा उच्च पदको देख्दछ। उसले लाजरसलाई अझै देख्छ जो उहाँको सेवाको निम्ति त्यहाँ छ। सायद यो मान्नु उचित छ कि यो धनी मानिसको अविश्वास थियो जसले अन्तराल यत्तिकै दुर्गन्धित बनायो, मनमानी ब्रह्माण्डको आवश्यकताको रूपमा होइन। हामीलाई याद गर्नुहोस्: येशू आफैंले, र उहाँ मात्र, हाम्रो पापपूर्ण अवस्थाबाट परमेश्वरसँग मेलमिलापको लागि अन्त्य गर्न नसकिने अन्तरलाई बन्द गर्नुहुन्छ। येशूले यस कुरालाई दृष्टान्तको यस भनाइमा जोड दिनुहुन्छ - कि उहाँमा विश्वास गरेर मात्र मुक्ति आउँदछ - जब उहाँ भन्नुहुन्छ: "यदि तपाईं मोशा र भविष्यवक्ताहरू सुन्नुहुन्न भने, यदि कोही मरेकाहरूबाट उठ्छ भने तिमीहरू राजी हुनेछैनौ"। (लूका १:१:16,31)।
परमेश्वरको उद्देश्य मानिसहरूलाई उद्धारको लागि ल्याउनु हो, उनीहरूलाई सताउनु हुँदैन। येशू एक मेलमिलापकर्ता हुनुहुन्छ, र यसलाई विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, उहाँ उत्कृष्ट काम गर्नुहुन्छ। उहाँ संसारको उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ (यूहन्ना :3,17:१), संसारको अंशको मुक्तिदाता होइन। «किनकि परमेश्वरले संसारलाई माया गर्नुभयो» (पद १)) - र हजारमा एक जना मात्र होइन। परमेश्वरसँग बाटोहरू छन्, र उहाँका तौर तरीकाहरू हाम्रा चालहरू भन्दा उच्च छन्।
डाँडाको उपदेशमा येशू भन्नुहुन्छ: “आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर” (मत्ती 5,43।।) कसैले सुरक्षित रूपमा यो अनुमान गर्न सक्छ कि उसले आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर्‍यो। वा कसैले यो विश्वास गर्नुपर्दछ कि येशू आफ्ना शत्रुहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ, तर हामीले एक अर्कालाई प्रेम गर्नु पर्छ भन्ने माग गर्दछ, र उसको घृणाले नरक छ भनेर व्याख्या प्रदान गर्दछ? त्यो अत्यधिक गर्भावस्था हुनेछ। येशूले हामीलाई हाम्रा शत्रुहरूलाई प्रेम गर्न बोलाउनुहुन्छ किनभने उहाँसँग पनि तिनीहरू छन्। «बुबा, तिनीहरूलाई माफ गर्नुहोस्; किनकि उनीहरू जान्दैनन् कि उनीहरू के गर्दैछन्! » उसलाई क्रूसमा टाँग्नेहरूको निम्ति उहाँको मध्यस्थता थियो (लूका १:१:23,34)।
पक्कै: जसले येशूको अनुग्रहलाई अस्वीकार गर्छन् जसले तिनीहरूलाई चिनेपछि पनि अन्ततः उनीहरूको मूर्खताको फलहरू लिनेछ। थुमाको खानामा आउन अस्वीकार गर्ने व्यक्तिको लागि, चरम अन्धकार बाहेक अरु कुनै ठाउँ छैन (चित्रमय अभिव्यक्तिहरू मध्ये एक जसमा येशू परमेश्वरबाटको दूरी, परमेश्वरबाट टाढा रहेको अवस्थाको वर्णन गर्नुहुन्छ; मत्ती २२:१:22,13; २ 25,30:० हेर्नुहोस्)।
रोमीहरूलाई लेखेको पत्रमा (११:11,32२) पावलले अचम्मको कुरा व्यक्त गरे: "किनकि परमेश्वरले सबैलाई अनाज्ञाकारितामा समावेश गर्नुभयो ताकि ऊ सबैमाथि कृपा देखाउन सक्छ।" वास्तवमा, मूल युनानी शब्दले सबैलाई निर्दिष्ट गर्दछ, केहि होइन, तर सबै। सबै पापीहरू हुन् र सबैलाई ख्रीष्टमा कृपा देखाइएको छ - चाहे तिनीहरूलाई मनपर्दछ कि छैन; उनीहरूले यसलाई स्वीकारे वा गर्दैनन्; तिनीहरू मृत्यु अघि फेला पार्दछन् वा गर्दैनन्।
यस पदको अर्को पदमा पावलले भनेका यस कुराको बारेमा अरु के भन्न सकिन्छ: "ए ओहो, कत्ति धेरै धन, परमेश्वरको ज्ञान र ज्ञान दुवै! उसका भाँडाकुँडाहरू र अन्वेषण बाहिरका पथहरू कत्ति बुझ्न सकिदैनन्! किनकि 'कसले प्रभुको अर्थलाई चिन्थे वा उसको सल्लाहकार को थियो?' वा 'कसले उहाँलाई यस्तो चीज दिए जुन परमेश्वरले उसलाई इनाम दिनु पर्छ?' किनकि उहाँबाट र उहाँमार्फत र उहाँमा सबै थोक हुन्। सधैंभरि उनको लागि महिमा! आमेन » (पद 33-।)
हो, उसको तौरतरिका यति अतुलनीय देखिन्छ कि हामी मध्ये धेरै जसो इसाईहरूले केवल सुसमाचार यति राम्रो छ भनेर विश्वास गर्न सक्दैनन्। र हामीमध्ये कोही-कोहीले परमेश्वरका विचारहरू यत्तिको राम्ररी जान्दछौं कि हामीलाई थाहा छ केवल जो कोही इसाई नहुँदा सीधा नरकमा जान्छ। अर्कोतर्फ, पावलले यो स्पष्ट पार्न चाहान्छन् कि ईश्वरीय अनुग्रहको अवर्णनीय सीमा हाम्रो लागि अकल्पनीय मात्र छ - यो रहस्य केवल ख्रीष्टमा मात्र प्रकट भएको छ: ख्रीष्टमा परमेश्वरले यस्तो काम गर्नुभयो जसले स्वर्गको चौडाईको मानव क्षितिज भन्दा बढी छ।
एफिससका मसीहीहरूलाई लेखेको पत्रमा पावलले बताउँछ कि परमेश्वरले शुरुदेखि नै यो योजना बनाउनुभएको थियो (एफिसी २: १-1,9-१-10) यो इजरायल र डेभिडको चुनावको लागि, संघीय निर्णयहरूको लागि अब्राहमलाई बोलाउनुको मूल कारण थियो (3,5-6)। परमेश्वरले "अपरिचित" र गैर-इस्राएलीहरूलाई पनि बचाउनुहुन्छ (2,12)। उसले दुष्टलाई पनि बचाउँछ (रोमी :5,6:११)। उसले शाब्दिक रूपमा सबैलाई आफैंमा तान्छ (यूहन्ना १:12,32:१) संसारको इतिहासभरि, परमेश्वरको पुत्रले "पृष्ठभूमिमा" काम गर्नुहुन्छ र परमेश्वरसँग सबै कुरा मिलाउनको उद्धार कार्य गर्नुहुन्छ (कलस्सी १: २ 1,15-२20) परमेश्वरको अनुग्रहको आफ्नै तर्क छ, जुन यस्तो धार्मिक तर्क हो जुन प्रायः धार्मिक व्यक्तिहरूको लागि अतार्किक देखिन्छ।
मुक्तिको एकमात्र तरीका
छोटकरीमा: मुक्तिको लागि येशू मात्र एक मात्र मार्ग हुनुहुन्छ, र उहाँ आफैले पूर्ण रूपमा सबैलाई आकर्षित गर्नुहुन्छ - आफ्नै तरिकामा, आफ्नो समयमा। मानव बौद्धिकतालाई समात्न सकिदैन भन्ने तथ्यलाई स्पष्ट पार्न यो मद्दत पुर्‍याउँछ: ब्रह्माण्डमा ख्रीष्ट भन्दा बाहेक अरू कतै छैन किनभने पावलले भनेजस्तै त्यहाँ त्यस्तो कुनै कुरा छैन जुन उहाँ आफैले बनाएको थिएन र उहाँमा छैन। (कलस्सी १: २ 1,15-२17) अन्ततः उहाँलाई तिरस्कार गर्ने मान्छेहरू उसको प्रेमको बाबजुद त्यसो गर्छन्; येशूले तिनीहरूलाई अस्वीकार गर्नुहुन्न (उसले होईन - उसले उनीहरूलाई माया गर्‍यो, तिनीहरूका लागि मर्‍यो र तिनीहरूलाई माफ गर्‍यो), तर तिनीहरूले उहाँलाई अस्वीकार गरे।
सीएस लुइसले यसो भने: "अन्तमा त्यहाँ दुई किसिमका मानिस हुन्छन्: जसले परमेश्वरलाई" तपाईंको इच्छा पूरा हुन्छ "भन्छन् र जसलाई परमेश्वरले अन्ततः 'तपाईंको काम पूरा हुनेछ' भन्छन्। जो नरक मा छन् तिनीहरूले यो भाग्य आफैलाई छनौट गरे। यो व्यक्तिगत निर्णय बिना, कुनै नरक हुन सक्छ। गम्भीर र स्थायी रूपमा आनन्दको लागि प्रयास गर्ने कुनै पनि आत्माले यसलाई गुमाउँदैन। जसले खोज्छ, फेला पार्छ। जसले ढकढक्याइन्छ खोलियो » (महान तलाक, अध्याय)) (1)
नरक मा नायकहरु?
जब मैले सेप्टेम्बर ११ का अर्थको बारेमा इसाईहरूले प्रचार गरेको सुनें, मलाई वीर अग्निशामक र प्रहरी अधिकारीहरू याद आयो जसले बल्दो विश्व व्यापार केन्द्रबाट मानिसहरूलाई बचाउनको लागि आफ्नो ज्यान दियो। यो कसरी मिल्दछ: कि इसाईहरूले ती मुक्तिदाताहरूलाई नायक भनेर सम्बोधन गर्छन् र उनीहरूको बलिदानको प्रशंसा गर्दछन्, तर अर्कोतिर वर्णन गर्दछन् कि यदि उनीहरूले आफ्नो मृत्यु हुनुभन्दा अघि ख्रीष्टलाई स्वीकार गरेनन् भने अब तिनीहरूलाई नरकमा यातना दिइनेछ।
सुसमाचारले वर्णन गर्दछ कि त्यहाँ विश्‍वासको व्यापार केन्द्रमा आफ्नो जीवन गुमाएकाहरूका निम्ति त्यहाँ आशा छ जुन ख्रीष्टलाई स्वीकार नगरी स्वीकार गरिएको थियो। यो पुनरुत्थान हुनुभएको प्रभु हुनुहुन्छ कि तिनीहरू मृत्युपश्चात् भेट्ने छन्, र उहाँ न्यायाधीश हुनुहुन्छ - उहाँ आफ्नो हातमा काँटी प्वालहरू लिएर - उहाँसँग आउने आफ्ना सबै प्राणीहरूलाई अँगाल्न र अँगाल्न तयार हुनुहुन्छ। तिनीहरूको जन्म हुनु अघि नै परमेश्वरले उनीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो (एफिसी १.1,4; रोमी .5,6..10 र १०) यो अंश अहिले विश्‍वास गर्नेहरूका लागि पनि भयो। केवल येशूमा आउनेहरूका निम्ति एउटा मुकुट यो सिंहासनको अगाडि आफ्नो मुकुट राख्नु र उहाँको उपहार स्वीकार गर्न। केहि छैन। हुनसक्छ तिनीहरू अरूको आत्म-प्रेम र घृणामा यत्तिकै जडिएका छन् कि उदाउँदो प्रभुलाई उनीहरू आफ्नो प्रमुख शत्रुको रूपमा देख्नेछन्। यो लाजमर्दो कुरा मात्र हो, यो एउटा ब्रह्माण्डिक विपत्ति हो किनभने ऊ उनको आर्केनी होइन। किनभने ऊ उनलाई प्रेम गर्छ, जे भए पनि। किनभने ऊ उसलाई कुखुराको पोखरीको रूपमा आफ्नो काखमा जम्मा गर्न चाहन्छ यदि तिनीहरूले उसलाई छोडिदिए भने।
यद्यपि, यदि हामी रोमी १.14,11.११ र फिलिप्पी २.१० मा विश्वास गर्छौं भने हामी यो अनुमान गर्न सक्छौं कि त्यस आतंककारी हमलामा मरेका धेरैजसो मानिसहरू खुशी हुँदै येशूका हतियारहरू आफ्ना आमाबाबुको काखमा जानेछन्।
"येशू बचाउनुहुन्छ", मसीहीहरू उनीहरूका पोस्टरहरू र स्टिकरहरूमा लेख्छन्। यो सहि छ। उसले गरिरहेको छ। र उहाँ मुक्तिको शुरुवातकर्ता र सहयोगी हुनुहुन्छ, उहाँ सृष्टि गरिएका सबै थोकका उत्पत्ति र लक्ष्य हुनुहुन्छ, सबै प्राणीहरू, मृतहरू सहित। भगवान्‌ले आफ्नो छोरालाई संसारको न्याय गर्न संसारमा पठाउनुभएन, येशू भन्नुहुन्छ। उसले यो संसार बचाउनको लागि पठायो (यूहन्ना .3,16..17-)
जेसुकै भनिए पनि: परमेश्वर अपवाद बिना सबै मानिसहरूलाई बचाउन चाहनुहुन्छ (१ तिमोथी २:;; २ पत्रुस::)), केवल केहि मात्र होइन। र तपाईलाई अझै थाहा हुनु पर्ने कुरा - ऊ कहिल्यै हार मान्दैन। ऊ कहिल्यै माया गर्न छोड्दैन। उहाँ कहिल्यै हुनुहुन्न जस्तो हुन्छ जो पहिले पनि थियो, हो र जहिले पनि मानिसहरूका लागि हुनेछ - तिनीहरूका सिर्जनाकर्ताहरू र मेलमिलापहरू। जालबाट कोही पनि गिर्दैनन्। कोही पनि नरकमा जानको लागि बनाइएको थिएन। यदि कोही नरकमा जान्छ - साना, अर्थहीन, अन्धकारको अनन्त संसारको कुनै पनि कुनामा - केवल यो किनभने तिनीहरू ईश्वरले उनीहरूको निम्ति रहेको अनुग्रहलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गरे। किनभने उहाँ उसलाई घृणा गर्नुहुन्छ (ऊ गर्दैन)। किनभने परमेश्वर बदला लिनुहुन्छ (यो छैन)। किनभने १) उसले परमेश्वरको राज्यलाई घृणा गर्दछ र उनको अनुग्रहलाई अस्वीकार गर्दछ, र २) किनभने परमेश्वर उसलाई अरूको आनन्द बिगार्न चाहनुहुन्न।
सुसमाचार बिल्कुल सबैको लागि आशाको सन्देश हो। ख्रीष्टियन प्रचारकहरूले मानिसहरूलाई ख्रीष्टमा परिवर्तन गर्न बाध्य पार्ने नरकको खतराको साथ काम गर्नुपर्दैन। तपाईं केवल सत्य, शुभ समाचार घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ: «भगवान तपाईंलाई माया गर्नुहुन्छ। ऊ तपाईंसँग रिसाएको छैन। येशू तपाईंको लागि मर्नुभयो किनकि तपाईं पापी हुनुहुन्छ, र परमेश्वरले तपाईंलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ कि उहाँले तपाईंलाई नष्ट गर्ने सबै कुराबाट तपाईंलाई बचाउनुभयो। त्यसोभए तपाईं किन खतरनाक, क्रूर, अप्रत्याशित र निर्दयी संसारबाहेक अरू केही छैन जस्तो गरी बस्न चाहनुहुन्छ? किन तपाईं आउँदैन र परमेश्वरको प्रेमको अनुभव गर्न सुरू गर्नुहुन्छ र उहाँको राज्यको आशिष्‌ पाउनुहुन्छ? तपाईं उहाँसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। उसले पहिले नै तपाईको पापको भुक्तान गरिसकेको छ। उसले तिम्रो शोकलाई आनन्दमा परिणत गर्नेछ। उहाँले तपाईंलाई भित्री शान्ति दिनुहुनेछ जुन तपाईंले कहिल्यै जान्नुभएन। यसले तपाईंको जीवनमा अर्थ र अभिमुखीकरण ल्याउनेछ। यसले तपाईंको सम्बन्ध सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। उसले तिमीलाई आराम दिनेछ। उसलाई विश्वास गर्नुहोस्। ऊ तपाईंको लागि पर्खिरहेको छ। »
सन्देश यति राम्रो छ कि यसले शाब्दिक रूपमा हामीबाट बाहिर जान्छ। रोमी:: १०-११ मा, पावल लेख्छन्: "किनकि यदि हामी अझै शत्रु भएको बेलामा उनको छोराको मृत्युले परमेश्वरसँग मिलाप गरेका छौं भने अब मिलाप गरिसकेपछि हामी उहाँको जीवनबाट अझ कति धेरै बच्नेछौं। ती मात्र होइन, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट मार्फत पनि हामी परमेश्वरमा गर्व गर्छौं, जसद्वारा अब हामीसँग मेलमिलाप भएको छ।
आशामा अन्तिम! अनुग्रह मा परम! ख्रीष्टको मृत्युको माध्यमबाट परमेश्वरले आफ्ना शत्रुहरूलाई मिलाप गर्नुहुन्छ र ख्रीष्टको जीवनमार्फत उहाँले तिनीहरूलाई बचाउनुहुन्छ। यसमा अचम्म मान्नुपर्दैन कि हामी हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट मार्फत परमेश्वरमा गर्व गर्न सक्छौं - उहाँ मार्फत हामी अन्य मानिसहरूलाई भनेको कुराको अंश भइसकेका छौं। उनीहरूले परमेश्वरको टेबलमा ठाँउ नभएजस्तो गरी बस्नुपर्दैन। उसले उनीहरूसँग मेलमिलाप गरिसकेको छ, तिनीहरू घर जान्छन्, तिनीहरू घर जान्छन्।
ख्रीष्टले पापीहरूलाई बचाउनुहुन्छ। त्यो साँच्चिकै राम्रो समाचार हो। सबै भन्दा राम्रो कि मान्छे कहिल्यै सुन्न सकिन्छ।